Rahararaha Sokatra tao Toliara - Mpivady ny mpitsara sy ny mpitsara - La vérité du 24 octobre 2018 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgache Rahararaha Sokatra tao Toliara – Mpivady ny mpitsara sy ny mpitsara –...
Mahavariana loatra ny nahafantarana fa mpivady ny mpitsara ilay raharaham-pitsarana, nahatrarana sokatra maherin’ny 10 000 tany Toliara, sy ny mpisolovava ireo voampanga. Voatery nahemotra ny fotoam-pitsarana.
Tsy tanteraka ny fitsarana ireo voarohirohy mikasika ny raharaha nahatrarana sokatra miisa 10 196 tokony natao, omaly tany Toliara. Antony, tsikaritra fa mpivady ny mpitsara misahana ny raharaha sy ny mpisolovava ireo voampanga. Araka izany, voatery nahemotra rahampitso alakamisy 25 oktobra ny fotoam-pitsarana. Tsiahivina fa olona telo ireo voarohirohy amin’ity raharaha ity, ny tompon’ilay trano nahatrarana ireo sokatra, sy ny mpiandry tanàna miisa roa. Mahavariana ny tranga toy izao, raha tarafina amin’ny tokony hisian’ny fahaleovantenan’ny fitsarana, tsy miangatra, ka tsy ahitana soritra ny lafiny fianakaviana.
Hisy raharaha sokatra hafa koa amin’io fotoana rahampitso io, maha voarohirohy teratany sinoa roa.
Manara-maso akaiky ny iraisam-pirenena
Mitaky ny hampiharana ny sazy hentitra amin’ity raharaha ity ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny ny tontolo iainana, ny WWF, ny Durrell ary ny Turtle Survival Alliance (TSA), araka ny lalàna 2005-018, mifehy ny biby arovana sy tandindomin-doza, toy ny sokatra. Takin’izy ireo koa ny fanarahana ny fifanarahana iraisam-pirenena misahana ny biby sy ny zavamaniry tandindomin-doza (Cites), nanaovan’i Madagasikara sonia.
Miantraika any amin’ny fanohanan’ny vondrona iraisam-pirenena an’i Madagasikara amin’ny lafiny rehetra ny tsy fampiharana ny lalàna, ny tsy fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena ary ny tsy famaizana mafy ny meloka. Hanamarinana izany, voasazy hatrany i Madagasikara amin’ny fitantanana ny andramena satria tsy nankatoavin’ny Cites ny drafitrasa naroso hatramin’izay. Hatreto, tsy voasazy ny mpanao trafika, na efa nijoro aza ny fitsarana manokana misahana ny andramena.
Randria sy CMS
9 magistrats malgaches sansctionnés dont un revoqué par le conseil de discipline d’après la Ministre de la justice
Article précédentPrisons 5 étoiles à Madagascar avec une centaine de morts en détention en 2017 – lexpressmada du 24 octobre 2018
Article suivantLe procès du trafic des tortues est ajourné à Tuléar car le juge et l’avocat de la défense sont des époux – Lexpressmada du 24 octobre 2018
« Risques pays » : Madagascar toujours dans la catégorie des...
Enquête d’Eddy bois de rose – Un général membre du gouvernement...